nandritra ny alin’ny sabotsy teo izy ireo.Araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena anefa dia efa hita avokoa izy ireny. « Noho ny fifanosehana sy fibosesehan’ny mponin’Antananarivo, tamin’ireo lalana nolalovan’ny ekipam-pirenena, indrindra ny alina no nitrangan’ny fanjavonan’ireo zaza ka tafasaraka tamin’ny ray aman-dreny na ny olon-dehibe izay nitondra azy ireny. Efa nisy toerana manokana anefa nametrahana ireo very ankizy sy zaza very ka efa hita daholo izy ireo. Io paik’ady tamin’ny fanokanana toerana manokana sy ny antso tsy misy farany natao io no nampilamina izany.» Araka ny tafa manokana nifanaovana tamin’ny zandary tomponandraikitry ny serasera afak’omaly alina sy omaly. Voatandro ny filaminana amin’ny ankapobeny, tsy nahitana naratra na maty. Nanamafy izany ny tompon’andraikitry ny tranom-paty eo amin’ny hopitaly HJRA. “Tsy nahitana fahafatesana na iray aza ny fitsenana ny Barea.”Hoy ity farany. Ho voninahitry ny ekipam-pirenena sy ny firenena Malagasy filaminana izany araka ny resaka manokana nifanaovana tamin’ireo mpitandro filaminana. Manana adidy mampita vaovao ireo rehetra nilaza zaza very rehefa hita izy ireny, indrindra ny tambazotram-piarahamonina sy ny serasera, hoy hatrany ny mpitandro filaminana mba tsy hanjakan’ny vaovao diso.